Batariga weyn ee 5000 Mah waa waxa Realme 5 yeelan doono | Androidsis
Batariga weyn ee 5000 Mah waa waxa Realme 5 yeelan doono
Horumarkii ugu dambeeyay, Geekbench wuxuu na tusay qaar ka mid ah tilmaamaha farsamo ee Realme 5 iyo buundooyinka ay qalabkan darajadoodu xigto ku duubtay keydkiisa. Sidii la filayey, waxqabadka terminal-ka halkaas wuxuu ahaa mid aad u wanaagsan, oo ku saleysan qeybta loogu talagalay iyo qiimaha ay lahaan doonto.
El Realme 5 Pro Waxay ahayd mobiil kale oo ku jiray wararka qaar toddobaadyadii u dambeeyay. Tani waa nooc ka mid ah horaa loo arkay, oo ka mid ah waxyaalaha sirta ah ee ka soo ifbaxaya, taas oo sidoo kale lagu buuxiyo taleefoonada kale ee caanka ah - oo aan sidaa u caan ahayn - moobiillada ka hor intaan la bilaabin, maadaama ay tahay in la xuso inaan maalmo kooban uun naga xigno inay rasmi noqoto. Sababtaas awgeed, faahfaahin badan oo ku saabsan labadaan shaqsi ayaa soo muuqday, sidoo kale sifooyin badan oo kuwan ka mid ah ayaa la muujiyay oo la xaqiijiyay, sida awoodda batteriga. Si kastaba ha noqotee, xogtan cusub waxay khuseysaa oo keliya Realme 5, maadaama shirkaddu ku dhawaaqday oo keliya moodeelkan.
Iyada oo loo marayo boorarka xayeysiinta, batari awood leh oo 5,000 Mah ah ayaa loo xaqiijiyay Realme 5. Ma fileyno in barnaamijka 'Realme 5 Pro' uu qalabeyn doono mid yar; Xaqiiqdii, waxaad u badan tahay inaad mid weyn weli leedahay, laakiin tani waa wax wali ku jira duub. Xog ahaan in la tixgeliyo, awood batterigaani wuxuu matalayaa koror ka badan 700 Mah, marka loo eego 4,230 mAh ee batteriga. Realme 3.
Realme 5 ku dhawaaqida batteriga
Laakiin wax walbaa sidaas uma fiicna. Sida war xun, qalabku ma taageeri doono VOOC 3.0 tiknoolajiyada degdegga ah ee lagu buuxiyo. Realme 5 Pro ayaa tan ku fasixi doonta inkastoo, nagu hogaamineysa inaan aaminno taas, haa, waxay la imaan doontaa 5,000 mAh ama batari ka sareeya.
Si dhakhso ah u soo dalacsiin la'aan arrimo kululeyn xitaa adiga oo isticmaalaya taleefankaaga casriga ah - macsalaamee hooggaaga lacag-bixinta ee leh VOOC Flash Charge 3.0 on # realme5Pro!
Daahfurka 12:30 PM, 20 Ogosto.
Baro waxbadan: https://t.co/IczXkhy4lB #QuadCameraSpeedster pic.twitter.com/j3wlvgNH8u
Geekbench ayaa dhawaan xaqiijiyay taas boosteejada ayaa isticmaali doonta Snapdragon 665, Android Pie iyo 4 GB RAM ah. Si kastaba ha noqotee, waa inaan xaqiijinaa macluumaadkan maalinta ay bilaabmayso, oo ah Ogast 20, taariikh ah, laga bilaabo maanta, in ka yar hal toddobaad.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Batariga weyn ee 5000 Mah waa waxa Realme 5 yeelan doono
Soosaarka maqalka ee iQOO Pro 5G wuxuu noqon doonaa aaminnimo sare
Redmi waxay durbaba ku shaqeyneysaa taleefankeedii ugu horeeyay oo leh 5G